Manchester United oo dhabar-jab kala kulantay saxiixa Raphael Varane, kaddib markii xiddiga Real Madrid uu doortay kooxdiisa xigta – Gool FM
(Madrid) 15 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qarka u saaran inay ku guuldarreysato saxiixa Raphael Varane kaddib markii daafaca Real Madrid uu doortay kooxdiisa xigta.
Dhabar-jab ayay Man Utd kala kulmaysaa saxiixa Raphael Varane, waxaana xiddiga Real Madrid la soo warinayaa inuu go’aansaday inuu dib ugu laabto dalkiisa Faransiiska.
28-sano jirkaan Varane ayaa la rumeysan yahay inuu bartilmaameed muhiim ah u yahay Red Devils, iyadoo Tababare Ole Gunnar Solskjaer uu doonayo inuu ugu dambeyn la saxiixdo laacib uu muddo dheer ku lamaaniyo Harry Maguire.
Xiddiga reer France ayaa loo arkaa mid ka mid ah daafacyada dhexe ee ugu fiican horyaalka La Liga, laakiin waxa uu ku guuldarreystay inuu qandaraaska u kordhiyo Los Blancos, iyadoo heshiiskiisu uu dhacayo sannadka soo socda.
Real Madrid ayaa doonaysa inay iska iibiso Varane xagaagan, iyadoo doonaysa inay siisato lacag qaali ah xagaagan, xilli Man United ay dooneyso inay la soo wareegto daafacan.
Ku guuleystaha Koobkii Adduunka ee 2018 ayaa la soo sheegayaa inuu go’aansaday inuu jeclaan lahaa inuu ku laabto dalkiisa hooyo isagoo ku biiraya Paris Saint-Germain, 10 sano kaddib markii uu ka tagay Naadiga Lens.
Sida laga soo xigtay Wargeyska Isbaanishka ah ee El Confidencial ayaa qoraya in PSG ay xiiseyneyso Varane iyo in ciyaaryahanka lagu heli karo lacag dhan 60 milyan oo euro oo u dhiganta 51.5 milyan oo gini.
Warkan ayaana dhabar-jab ku ah kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer maadaama Varane uu go’aansaday inuu dib ugu laabto dalkiisa hooyo, laakiin Man United waxa ay ku qasban tahay inay baadi-goobto daafac dhexe oo kale.
Si kastaba ha noqotee, arrintaan ayaa ku soo aadaysa in xilli Manchester United ay saxiixa Raphael Varane ku soo guuldarreysatay sanadkii 2018, markaasoo xitaa la wariyey in Ed Woodward uu ku doonayey inuu kula wareego adduun dhan 100 milyan oo gini.